CUCUMBER "DAREEMO": SHARAXAADDA KALA DUWANAANTA IYO ASTAAMAHA BEERASHADA - NOOCYO QAJAAR LA MID AH PARTHENOCARPIC
Ugu Weyn Ee Noocyo qajaar la mid ah Parthenocarpic
Sida loo koro qajaarka "Dareemo": Faa'iidooyinka Fikradaha
Way adag tahay in la helo beerta qurxinta leh ee aan ku mashquulin qajaarka. Laakiin xitaa wuu ogyahay in guusha ee sii kordhaya dalagga beerta this ku xiran tahay doorashada saxda ah ee kala duwan ee dhirta. Wixii beereed ee dhulka u furan waa mid ku haboon fasalka "Adag".
Cucumber "Dareemo F1": sifooyinka noocyada kala duwan
Qeexida qajaarka "Dareemo" waxaa ku jira warar sheegaya in dhirta ay calaamad u tahay nooca dhediga ah ee ubax. Ugxanuunku waxay leeyihiin nooc bouquet ah oo isku xiran, illaa shan miro ayaa lagu qalay hal sinus.
On stem ugu weyn, waxay ku koraan ilaa 13-16 cm dhererka, on caleemaha dhinaca labo mitir oo ka yar. Jidhkoodu wuxuu gaaraa 4 cm, Zelentsy wuxuu miisaankiisu kor u dhaafaa 140 g. Midhaha maqaarku waxay leeyihiin maqaarka cagaaran ee madow, qodxan cad, iyo qaab dhismeedyo.
Waxay awoodaan in ay sii wataan dhadhanka ilaa 10 maalmood. Ilaa 10 kg oo dalag ah ayaa laga goyn karaa baadiyaha, haddii aad raacdo farsamooyin kasta oo xeeldheer.
Sida laga soo xigtay dib u eegista qajaarka "Jaahwareer" ayaa dhadhan fiican leh: dhadhanka hodanka ah iyo macmacaan macquul ah. Jirka ba'an ayaa si fiican u rogrogaa. Diirka, yar yar ee dhumucdeed, ficil ahaan ma dhadhamo qadhaadh, xajinta midabka xitaa daaweynta kulaylka iyo kaydinta dheer ee heerkulka hooseeya.
Ma taqaanaa? Sida laga soo xigtay hal Sida laga soo xigtay noocyada kala duwan ayaa lagu duubay Hindiya. Meelo kale ayaa sheegaya in ay soo saartay shirkadda abuurka abuurka ah ee Gavish, oo shaqadeeda loogu talagalay inay abuurto iskudhaf iskood u sameysma.
Faa'iidooyinka iyo khasaarooyinka geedka
Khajaarka "Duco" waxay si fiican u dareemaan labadaba aqalka dhirta lagu koriyo iyo berrinka bannaan. Waxay si weyn u qiimeeyeen by bannaanka u qaab duwanaanta.
Faa'iidada ee kala duwan waa xididdada awoodda, kuwaas oo siinaya baadiyaha wanaagsan nafaqada iyo koritaanka xoog leh. Ka mid ah ugu weyn faa'iidooyinka darajo u qoondeynaya:
hore u bislaaday;
farbarashada isticmaalka miraha;
Tilmaamayaasha badeecadaha wanaagsan ee Zelentsy.
Waxay sidoo kale u adkaystaan ​​cuduro badan oo dabeecadda qajaarka ah: kallanaatka rootiga, fayruuska maskaxda, barta olive, xummad dhab ah iyo jeexan.
Ma taqaanaa? Beeralayda iyo khubarada nafaqada waxay u egyihiin qajaar la mid ah khudaarta, halka botanistana ay u gudbinayaan midho, iyo mararka qaarkood in ay beeraan been ah (bocood).
Beeridda abuurka qajaarka ee dhulka furan
Cucumber "Jacayl" ee bannaanka u furan ayaa la koray si la mid ah noocyo kale, laakiin waxay leeyihiin qaababka qaar.
Guusha guurka mustaqbalka waxay ku xiran tahay sida aad si fiican u diyaarinayso abuurka beeritaanka. Nidaamku waa inuu doorto oo uu kala soocaa abuurka habboon.
Markaas waa in lagu qooyay xal salineed iyo kululeeyo meel diiran, tusaale ahaan, on batari kuleyliyaha dhexe. Ka dib markaa, miraha waxaa lagula talinayaa in lagu nadiifiyo xal daciif ah oo ah kiniinka potassium ama la qaado NIUIF-2.
Si ay u yareeyaan si ka wanaagsan, marka aad qallajisid waxaad isticmaali kartaa cabitaanka soodhaha, sulphate sulphate ama boric acid, kuwaas oo ah kor u qaadayaasha kobcaya. Marxaladda soo socota way adagtahay abuurka, taas oo lagu meeleeyo dhowr maalmood oo qaboojiyaha.
Xulashada iyo xulashada goobta
Calaamadaha noocyada kala duwan ee qajaarka "Ducada" waxay xaqiijinaysaa dhalidda sarreysa. Laakiin for beergooyska si aad ugu faraxsan ninkii beerta ka shaqaynayay, waxaa ugu wanaagsan in lagu beero abuurka bilowga Juun. Diiditaanka waxaa la fulin karaa illaa dhammaadka bisha Luulyo.
Laakiin waxaad u baahan tahay in la xusuusto, mar dambe beeridda, hoos u dhali dhalidda: qiyaastii hal kilo for todobaadkii dhammaa. Isbeddelkani wuxuu la xiriiraa hoos u dhaca xoogga iftiinka.
Sida waafaqsan, soo degitaanka waa inuu doortaa meelo iftiin leh, laakiin laga ilaaliyo dabaysha, diyaarinta iyo qabow. Waxaa lagugula talinayaa in meeshii aan qallajin karin qorraxda, sida dhirta jecel yahay qoyaan. Waxay jeceshahay in ay ku koraan carrada madow, laakiin sidoo kale waxaad ku guuleysan kartaa goosashada wanaagsan ee cirridka.
Doorka kuwa horay u soo maray
Seeds of qajaarka kala duwan ee this lagu beeray sariiraha hore loo diyaariyey. Laakiin dhalidda waxaa sidoo kale muhiim ah waxa dhirta horay loogu koray aagga - ixtiraamka wareegga dalagga.
Qodcadda Qaadista "Jiraan" waxay ku guuleysan doontaa meelahaas halkaas oo ay ka mid yihiin dhadhanka, kaabajka, baradhada, karootada, iyo khudradda kale ee xididada hore loo koray. Waxaa si weyn looguma talin in lagu beero "duufaan" kadib qaraha qashinka, qaraha, bocorka iyo qaraha kale.
Si loo diyaariyo sariiraha beeritaanka, waxaa muhiim ah in si sax ah loo bacrimiyo. Si loo dhamaystiro, xilliga dayrta, ash, digada iyo nitroammophoska ayaa lagu dabaqaa heerka 3 koob, 3 baaldiyo iyo 70 g halkii mitir oo loogu talagalay goobta loo qorsheeyey.
Guga, ka hor inta beero, waa lagama maarmaan in la qodo ciidda, ka dibna dabooli filim wiig ah si ay si fiican u kululaato. Shaqada waxaa loo qabtaa si ay u dhacdo dhamaadka bisha May dhulku wuxuu diyaar u yahay beeritaanka.
Beeridda beerashada: qaabka iyo qoto dheer
Qoditaanka qajaarka "Dareemid" waxay ku xiran tahay tiknoolijiyada ay dooranayso beerta. Waxaa jira laba nooc oo tiknoolajiyad ah oo loo isticmaalo noocyada kala duwan: cirbadeynta iyo qiyaasta. Xaaladda kowaad, ceelasha waxaa lagu sameeyay fogaan ah 40 cm midba midka kale.
Mid kasta oo ka mid ah, abuurka (3-4 gogo ') waxaa lagu aasaa 2-4 cm. Ka dibna waxay ku rusheeyeen ciid dabacsan. Kadibna waxaa lagu daboolay waxyaabo gaar ah, badanaaba filim. Laba toddobaad kadib, waxaad u baahan tahay inaad fiiriso filimka hoostiisa iyo dhuuban caleemaha.
Habkani uma baahna samaynta duurka, maadaama ay jirriddu isu faafayaan dhulka. Waxay u baahan yihiin oo kaliya in loo diro markii loo baahdo.
Waa muhiim! Marka ay jirto iftiin aan ku filneyn, koritaanka dhirta ayaa hoos u dhacda, miraha way koraan oo yar yihiin, waxay leeyihiin calaamado huruud ah. Tani waxay sabab u tahay sawir-maskaxeed.
Kala duwanaanshaha noocaan ah waxaa loo abuuri karaa qaab kale - qumman koritaanka. Si arrintan loo sameeyo, miraha waxaa lagu beeray grooves pre-diyaariyey, masaafada u dhaxaysa taas oo ah 1 m. Seeds waxaa lagu beeray fogaan ah 15 cm oo lagu aasay 2.5-3 cm.
Marka caleemaha muuqanayaan, way ku yar yihiin, si ay u fogaan karto qiyaastii 35 cm waa loo ilaaliyaa caleemaha, ka dibna, taageero ayaa lagu rakibaa meel kasta oo baadiyaha ah, oo ay weheliyaan dhirta markaa ka dib.
Noocyada daryeelka iyo beerista qajaar beerida "Dareemid"
Qajaarnimada dhiirranaanta ayaa lagu koray isla tiknoolojiyada beeraha sida noocyo kale oo khudradeed. Wax yar ayaa ka duwan marka la beeray aqalka dhirta lagu koriyo iyo berrinka bannaan. Laakiin tan iyo kala duwanaanta this waxaa lagu qiimeeyaa ah Bisaylkiisa hore ee hawada u furan, waxaan tixgelin doonaa sifooyinka ah ee ay beerashada ee sariirood beerta.
Sida horey loogu soo sheegey, dhirta waxaa loo oggolaan karaa in si xor ah dhulka ugu foorarsato, kiiskani maaha inaad daryeesho qaabkeeda, ama waxaad abuuri kartaa taageero aad ku haysato walwal, inta badan, trellis ayaa loo isticmaalaa sidii taageero.
Ka dibna samaynta qajaarka "geesinimo" waxaa lagu fuliyaa hal asliga ah. Si arrintan loo sameeyo, waxaa laga saaraa shaaribada wakhtiga, ugxansidaha, caleemaha jilicsan, hagitaanka koritaanka jihada saxda ah.
Waa muhiim! Mararka qaarkood marka baadiyaha u koraan duurjoogta, ma si fiican u miro dhalin. Xaaladaha noocaas ah, waxaa lagula talinayaa in laga saaro taarikada caleenta waaweyn, oo caleemo ku haysa meelahooda.
Waraabinta, dabacsan iyo hoyga
Kala duwan ayaa la waraabiyaa sida kuwa kale: badan, laakiin si aysan biyuhu u joogsan. Nadiifinta biyo la'aantu waxay keeni kartaa qadhaadhka miro, iyo inta lagu jiro formation of ugxan - si loo yareeyo dhalidda. Wixii waraabinta isticmaali biyo diirran, taas oo aan ku shubay asalka ah, laakiin beerta oo dhan.
Miisaanka biyaha waa qiyaastii 5 litir oo halkii baadiyaha ah. Haddii ay dhacdo roobab xoog leh ama abaaro daba dheeraaday, waa in la hagaajiyaa.
Qajaarada qaangaarku way ku adag tahay balakoonka, xayawaanka, baaldi, foosto, bac, iyo xitaa dhalo caag ah.
Beerta khibrad leh ayaa sheegta in dhalidda ay kala duwan tahay ay ku xiran tahay quudinta waqtigeeda iyo sidoo kale waraabka, 80%. Xilliga xiliga waxaa lagu talinayaa in la bacrimiyo iyada oo leh arrin bakeeriga cusub ah oo lagu qasi jiray biyo lagu cabiro 1:10. Qajaarka quudinta ka dib beerashada laba toddobaad kadib.
Sida ugu dhakhsaha badan ee geedka bilaabaan inay Bloom, isticmaali dabeecadaha dhirta. Marka ay timaaddo fruiting, waxay ku darayaan dambaska fuska iyo buufin caleemaha xal of HOL. Si tan loo sameeyo, ku dar 10-15 g oo badeecada ah baaldi biyo ah.
Waxaa la aaminsan yahay in "Kacsanaanta" kala duwan ay u adkaysato cudurada kuwaas oo sifeynaya khudradan: geedka xayawaanka, qajaarka qajaarka, qajaarka budada ah.
Laakiin sida qiyaasta ka hortagga ah, waxaa lagu talinayaa in si joogto ah u buufin leh fungicides haddii cuduradu ka muuqdaan meelaha deriska ah ama cimilada waxay gacan ka geysataa horumarintooda.
Si looga hortago cayayaanka suurtagalka ah, waxaa lagula talinayaa in la qodo sariiraha ka hor intaan la beeriin, laguna hirgelin ciidda leh kuleyl kulul ama biyo karkaraya. Kaliya xulashada beeraha waxyaabaha caafimaadka lehadigoo isticmaalaya qalabka laysku duro.
Inta lagu jiro xilli sii kordhaya, geedka waxay u baahan tahay jaridda dhirta. Xilliga dayrta, waxaa lagama maarmaan ah in laga saaro dhammaan dhalada iyo cawska sariiraha, iyaga oo baabi'iyay banaanka goobta.
Goynta iyo kaydinta khudaarta qajaarka
Natiijada ugu horeysa ee shaqada beerta waxaa la arki karaa bil kadib markii qajaar la beeray, badanaa badhtamaha July. Midhaha ugu horreysa waa suurad wacan in la uruuriyo ka hor inta aanay u korin 10-11 cm.
Xasuuso in ugxan dhirta lagu diyaariyo buste, sidaas daraadeed marar badan ayaad soo saartaa khudradda, dhaqso intaa ka badan oo miro ah ayaa u bislaanaya, kordhinta dhalidda. Heerka celceliska qiyaasta celceliska waa hal mar labadii maalinba mar. Iyadoo u hoggaansanaanta farsamada beeraha, qajaarku wuxuu dhiiri geliyaa ilaa 10 kg dhalidda baadiyaha, taasoo ah, ilaa 20 kg oo laga soo qaado mitir labajibbaaran.
Ururinta midhaha ayaa lagula taliyaa aan qaan-gaarinsi aanay u dhicin qadhaadh. Intaa waxaa dheer, miro buuxa u bislaaday kaliya ku habboon tahay ururinta abuurka. By habka, ma aha ku haboon tahay soo degaan sanadka soo socda, haddii aan si gaar ah ugu hadlaan kala duwanaanta this.
Waxaa lagula talinayaa in aad soo qaadato khudaarta goor dambe oo fiidkii ah ama subaxdii hore si markaa asaasiga ah uu ku sii jiro baadiyaha. Si aad tan u sameyso, isticmaal mindi ama sharooto. Marnaba ma furi kartid qajaarka, jiid ama ka soo baxa baadiyaha, haddii kale dhirta way dhiman kartaa.
Haddii goosashada la dhigo qabow (7-10 ° C), oo laga ilaaliyo meel iftiin leh, qoyaan ah qiyaastii 80-90%, daboolay walxaha hawada kulul, waxaa lagu kaydin karaa illaa 10 maalmood iyadoon lumin dhadhanka. Haddii heerkulka uu aad u sareeyo oo qoyaanku hoos u dhaco, nolol shelf ayaa la dhimayaa laba maalmood. Miraha waxay leeyihiin maqaar aad u khafiif ah, si dhakhso ah lumiyaan qoyaanka.
Haddii aan hoos u dhigno maqnaanshaha, halkaasoo heerkulka uu kudhaco 0 ° C, waa lagu kaydin karaa ilaa hal bil. Dabcan, haddii la siiyo dalagyada beeraha ee la soo mariyey oo laga saaray qajaarkii la burburiyey. Ku kaydi sanduuqyada, sanduuqyada kartoonada ama balaashyada saaran mashiinka caagga ah. Sidoo kale darajada waxaa loo isticmaali karaa diyaarinta kala duwan.
Dadaaladda qajaarka kala duwan ayaa jecel inay koraan beeralayda khibrad leh iyo jimicsi. Agrotechnology waa fudud, gaar ahaan soo jiidashada caabuqa cayayaanka iyo cudurrada kala duwan. Kala duwan waxaa lagu kala gooyey horudhac, bajin hore iyo dhadhan fiican.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Noocyo qajaar la mid ah Parthenocarpic 2020